र Apg29 मा टिप्पणी केही netiquette
एक इमोजी रूपमा Christer Åberg।
अविश्वसनीय यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, त्यहाँ छन् केही (नोट: केही) लगातार फैशन पङ्क्तिमा आफूलाई पाउन जो परिवर्तन जस्तै देखिन्छ कहिल्यै।
र Apg29 मा टिप्पणी केही netiquette।
1️⃣ कहिलेकाहीं राम्रो मान्छे टिप्पणीमा loggerheads आउँछन्। मेरो सल्लाह छलफल सुरु गर्न र प्रत्येक अन्य विरुद्ध जाने छ। तपाईं त यो राम्रो छ, तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्।
तिनीहरूले अन्यथा यो लेख्ने केहि गर्न कुनै प्रयोग हो, प्रत्येक अन्य तपाईं उपचार गर्न चाहनुहुन्छ बाटो व्यवहार गर्छन्।
टिप्पणी मा अनुपयुक्त 2️⃣ के कुरा, तपाईंले मलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न deletade टिप्पणीहरू सधैं deletade अप लिएर इनाम कि टिप्पणीहरू। एक टिप्पणी किन deletad छ Apg29 कहिल्यै बताउँछन्। यो आत्म-बुझाइ हुनुपर्छ।
3️⃣ तपाईं Apg29 आलोचना वा (Christer Åberg) मेरो बारे छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, अरु कतै यो गर्न सक्छन्, तर यहाँ छैन।
4️⃣ तपाईं संयमता पङ्क्तिमा आग्रह गर्नुभएको छ भने गरिएको र र टिप्पणी फिर्ता आउन प्रेम थियो, त्यसपछि यो तपाईं असल Netiquette 🙂 राख्न लागि मात्र हो।
5️⃣ पाठ्यक्रम गलत शिक्षा propagating छैन दिनुभयो। टिप्पणीकारहरू यो गरिरहेका छन् जो deletade र संयमता पङ्क्तिमा वादा हो।
6️⃣ बस लेख मा लेखिएको छ के को बिरुद्ध जान्छ जो टिप्पणीकारहरू यसलाई कहीं पनि गर्न सक्छन्, तर यहाँ छैन।
7️⃣ पाठ्यक्रम, कुनै अवैधानिक श्रेय।
❗️ अतुल्य यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, त्यहाँ छन् केही (नोट: केही) लगातार फैशन पङ्क्तिमा आफूलाई पाउन जो परिवर्तन जस्तै देखिन्छ कहिल्यै।
❤️ तर राम्ररी गऱ्यौ र आँखा को लागि एक मायालु स्वर र उद्धारको साँच्चै राम्रो टिप्पणी लेख्छन् छन् जसले तपाईंलाई सबै धन्यवाद! तपाईं Apg29 मा एक धेरै राम्रो जलवायु सिर्जना र एक अद्भुत खुशबू फैलाउन छ!
✔️ पाठ्यक्रम यी नियमहरू bönesidan पनि। तर त्यहाँ एक bönesida र कुनै कुरा पृष्ठ वा "मुद्रक पृष्ठ" छ कि सजग हुनुहोस्। केहि छ कि प्रार्थना वा tacksägelseämnen deletas छैन।
✔️ आफ्नो पूरा नाम नामकरण गरेर बाहिर मान्छे दर्शाउन छैन, र यो तपाईंको लेखन लागू हुन्छ।
✔️ Klagoböner, बदला प्रार्थना र hatböner स्पष्ट छैन स्वागत छ।
जब तपाईं bönämnen मा पठाउन ✔️ कृपया आफ्नो आँखा मुक्तिका छ।
📝 पाठक मेल
तपाईं मसीही सिद्धान्तहरूमा कि खण्डमा बारेमा भन्न केहि छ भने त हामीलाई एक ई-मेल पाठक लेख्न कृपया! इमेल कम्तीमा 300 शब्दहरू तर प्राथमिकताको 500 वा बढी हुनुपर्छ। येशूले मुक्ति बप्तिस्मा, आत्मामा बप्तिस्मा जवाफ दिए, प्रार्थना बारेमा गवाही र येशू हिंड्न। यो हामी बस्ने यो समयमा आवश्यक छ!
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ ई-मेल सीधा Apg29 गर्न वा यो पाठक ई-मेल छाप्न फारम ।
पाठक इमेल र टिप्पणीहरू आफ्नै राय छ कि सम्झना। यसलाई म साझेदारी छैन भनेर एक राय लेखिएको छ भने, तपाईं यसलाई लागि मलाई दोष सक्दैन! "दोषी संघ द्वारा" ( ऋण को संघ ) यहाँ समावेश गरिएको छैन!
यो पनि मलाई द्वारा लेख र गरे छैनन् भनेर भिडियो लागू हुन्छ, वा म मेरो स्टुडियो मा कसैले साक्षात्कार यदि म संग नै राय साझेदारी छैन भनेर।
तर म कसरी खुसी तपाईं र धेरै अन्य मेरो विभिन्न प्रत्यक्ष प्रसारण मेरो ब्लग साइट Apg29 र नजर भ्रमण छु!
यसलाई त्यसभन्दा सम्भव छ भनेर तिनीहरूलाई धेरै अन्यसँग खुसी साझेदारी गर्नुहोस्!
परमेश्वरले तपाईंलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष् र यो साँच्चै राम्रो छ!
Vecka 23, söndag 13 juni 2021 kl. 20:24